Ny fianarana ara-pahasalamana an'ny Apple dia manomboka ho an'ny mpampiasa Apple Watch voasoratra anarana. Avy amin'ny mac aho
Javier Porcar | | Apple Watch, About us
Nanantena izahay fa avy any Mac aho, Apple dia mivelatra a mianatra miaraka amin'ny Stanford University. Ny fiaraha-miasa dia mikendry ny handinika ny fihetsiky ny fo amin'ireo mpampiasa Apple Watch, izay nisoratra anarana tamin'ny programa, dia mahalala ny fanaony ary misoroka ny olana mety hitranga amin'ny koronosy.
Raha vantany vao nomanina ny hetsika tokony hatao Apple miaraka amin'ny Stanford UniversityMba hisamborana ny dingana amin'ny fandinihana, tonga izao ny fotoana hanangonana angona. Ny orinasa dia mandefa fampandrenesana ho an'ny tompona Apple Watch kendrena amin'ny fandalinana, mba hampahafantarana azy ireo fa eo am-panatanterahana ny tetikasa.
Rehefa mahazo ny fampandrenesana ny mpampiasa dia manome alalana izy ireo hizara ny angon-drakitra amin'i Apple manomboka amin'io fotoana io. Ny fepetra takiana dia fototra, ao anatin'izany ny fanondroana fa amin'ny teny Anglisy ny fifandraisana. Amin'ity tranga ity, ireo mpampiasa manana aretim-po vokatry ny fibrillation atrial sy ny flutter atrial dia tsy afaka mandray anjara amin'ilay fianarana. Ireo izay mihinana fanafody manify ra, tsy manao izany koa.
Manaraka izany dia mandefa mailaka roa i Apple. Raisin'izy ireo ny antontan-taratasy fanekena mahazatra momba ny vaovao izay ho raisina. Tsy inona izany fa ny endrika mahazatra an'ny lalàna fiarovana data. Amin'ity tranga ity dia fehezin'ny HIPAA.
Ny fandalinana, fantatra amin'ny anaran'ny Fianarana Apple Heart- fanombanana ny photoplethysmography miorina amin'ny famantaranandro mba hamantarana ireo arrhythmia am-po, dia nambara tamin'ny fampisehoana ny Apple Watch 3 septambra. Santionany iray hafa an'ny Apple ny fampifantohana ny fampiasana ny Apple Watch hitondrana fomba fiaina mahasalama. Ity hetsika ity dia ampiana amin'ireo hafa nomanin'ny orinasa, toa ny fandraisana andraikitra kasaina hatao amin'ity volana febroary ity.
Apple dia hanararaotra hanaparitaka teknolojia hafa, noho ny angon-drakitra nomen'ny mpampiasa:
Ity fandalinana ity dia ampahany amin'ny fampivoarana fitaovana famotopotorana vaovao ary ny angon-drakitra fandalinana sasany dia hampiasaina handefasana ny FDA sy hitadiavana fankatoavana ireo fitaovana fikarohana hafa.
Tsy fantatra na i Apple no hamolavola ilay fitaovana, na ny oniversite Stanford na ny fiaraha-miasa misy eo amin'izy roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Manomboka ny fandinihana ny fahasalamana Apple, ho an'ny mpampiasa Apple Watch voasoratra anarana